Vobika chingwa chembambaira | Kwayedza
Vobika chingwa chembambaira
06 Sep, 2019 - 00:09	 2019-09-05T17:20:00+00:00 2019-09-06T00:05:36+00:00 0 Views
Mai Angeline Madzima vachitaridza chingwa chavanobika nembambaira
CHIKAMU cheDevelopment Technology Centre chiri paUniversity of Zimbabwe (UZ) chiri kusimudzira zvidzidzo zvemabasa emawoko kuburikidza nekuita mabhindauko akasiyana sekubika chingwa, mahewu nejamhu izvo zvinogadzirwa kubva mumbambaira.
Mai Angeline Madzima – avo vanova lecturer kuchikamu ichi – ndiye mudzimai ari kuita zvinorova mukuona kuti utano hwemhuri hwasimudzirwa kuburikidza nekushandisa zvirimwa zvakaita sembambaira, madhumbe nemufarinya.
“Tinotora mbambaira todzimenya, todzigadza pamoto uye kana dzaibva todzitswanya-tswanya kuita bota. Tinotora komichi imwe chete yefurawa toisa parutivi uye totora shuga, munyu, mafuta nembiriso zvakaringana.
“Tonorega zvofuta, tozoisa muovhoni kuti chiite chingwa. Izvi zvakakosha nekuti kune vamwe vanhu vanorwara kana vakadya gorosi, saka mbambaira dzakanaka nekuti hadzina zvakawanda uye zvinopa utano nokuti ndiko kudya kwedu kwechivanhu kunokurudzirwa,” vanodaro Mai Madzima.
Vanoti vanogadzira zvakare zvinwiwa kubva mumbambaira.
“Tinogadzira zvinwiwa zvinotodiwa nevana vachienda kuchikoro pamwe nemahewu kubva mumbambaira. Zvinwiwa izvi zvine musiyano nezvimwe sezvo zvisina zvirwere zvinonyuka kuvanhu kubva mazviri,” vanodaro.
Vanoti kuburikidza nembambaira, vanogadzira jamu rekuzora pachingwa iro rinonaka semare.
Mai Madzimai vanotizve vari kutarisira kuvandudza bhindauko iri paUZ kuti vazovawo nemupanda unenge uchitengesa chingwa, mabhanzi nezvinwiwa zvemhando iyi kuvadzidzi nemari yakaderera.
“Kana tikawaniswa nzvimbo yakasununguka, tinovimba tichange tave kutengesa zvigadzirwa zvedu pachikoro kureva kuti vadzidzi havazodhurirwa. Chingwa chava kudhura muzvitoro zvekuti vadzidzi vazhinji vari kusvika pakuomerwa, nokudaro tinofanira kuita nzira dzinoita kuti upenyu hureruke pane kuti tiwanikwe tichingotenga zvinhu zvose,” vanodaro.